Shiinaha Kabadh adag oo alwaax ah oo sare iyo kuwo hoose oo kaydinta golaha wasiirada # 0024 Soo-saar iyo Warshad | Yamazonhome
Farshaxanno alwaax ah
Alaabta guriga lagu kariyo
Golaha Wasiiradda Kaydinta Kaydka Fudud ee adag oo adag iyo # Low # 0024
Qaabka ： Casri ah
Magaca: qolladaha fadhiga
Nambarka moodeelka: Amac-0024
Bartilmaameedyada la adeegsan karo: Dadka waaweyn
Cabbirka: Nooca A: 400 × 450 × 800mm
Nooca B: 400 × 450 × 1050mm
Midab: Sida ka muuqata sawirka ama loo habeeyay
La habeeyay: Haa
Meel ku habboon: Qolka fadhiga, Hoteelka, Daraasadda
Asal ahaan: Weifang, Shiinaha
Qalabka: Qoryaha adag
Jir ugu weyn waa geed tayo sare leh
Dhammaan kaymaha looma yaqaan geedka cad. Liinta ku dhasha Huainan waa liinta, halka kuwa ku dhasha Huaibei ay yihiin liinta. In kasta oo alwaaxa geedku ka tirsan yahay hal qoys oo ah geedkii caddaa, haddana xaddidnaanta cimilada iyo bay'ada aagga uu ku baxo, qamadihiisa alwaax waa cidhiidhi, khadad madow, iyo nabarro. Markaad dooranaysid alaabta alwaaxda ah ee saxda ah, waxyaabaha ugu fiican waa inay ahaadaan geed cad, qalabka guryaha ee aan abuurnana waxay ka samaysan yihiin tayo sare oo laga soo dhoofiyo Waqooyiga Ameerika oo aan lahayn maqaar macmal ah
Booska khaanadda ku lifaaqan
Booska khaanadda ee ku lifaaqan ayaa kaa caawinaya kala sooca iyo keydinta, isla markaana ilaalinaya asturnaantaada. Naqshadda jeexjeexan ee khaanadda khaanaddu waxay ku siinaysaa dareen ammaan oo dheeri ah. Gudaha gudihiisuna waa siman yahay oo fidsan yahay, lagamana xoqido xitaa haddii aad dhar jilicsan ku dhejiso.
Geesaha wareegsan leh qaabdhismeedka tenon iyo tenon
Naqshadeeyaha ayaa ka soo qaatay alaabada Kuuriya wuxuuna isku darsaday astaamaha alaabta Shiinaha si loo horumariyo qalabka Nordic. Khadadka fudud iyo kuwa jilicsan, qaababka geedkii qurxoonaa, waxay jabiyeen caajisnimadii, mana jirto qurux qurux badan oo fudud. Qaab dhismeedka tenon-iyo-mortise wuxuu kugu soo celinayaa adduunka dhabta ah iyo kan dabiiciga ah.
Qoryo adag oo adag oo lugaha kabadhada u janjeeri
Alwaaxa adag ee lugaha armaajada alwaaxa waxaa loogu talagalay xagal qallooc leh oo macquul ah iyadoo loo eegayo astaamaha culeyska golaha wasiirada, taasoo kordhinaysa awoodda qaadista. Geedkii Caddaa ee ka yimid Mareykanka wuxuu leeyahay qaabab qurxoon, muuqaal hodan ah, farqiga midabka yar, midabka alwaaxa la dhammeeyayna waa mid dabiici ah oo saafi ah. Ma jiraan qurxinno badan iyo caqabado, alwaax adag oo saafi ah ayaa wali loo isticmaalaa walxaha, qurxinta sida qafisyada xardhan ayaa lagu yareeyay naqshadeynta. Khadadka fudud ayaa tarjumaya quruxda fudud.
Khaanadaha waxay ka samaysan yihiin bogagga qoryaha adag
Khaanadda dhexdeeda waxay qaadataa tareenka hagaha ee alwaaxda ah, oo aan fududayn in la waxyeeleeyo, iyo in badan oo la adeegsadaba, way ka sii jilicsan tahay. Jiidida ayaa ah mid aan dadaal lahayn oo aan buuq dhalin.
Qaabka Nordic kabadhka khamriga alwaax adag
Qaabka Nordic kabadhka khamri adag alwaax, kaydinta bandhig, qiimaha qurxinta iyo shaqada kaydinta labadaba Waxaa jira laba cabbir oo aad adigu dooran karto. Boodhadhka weyni waa toos oo qalabka la isticmaalay waa run. Ku buufinta furan waxay ilaalisaa maqaarka geedkii si aad u ballaaran, oo xitaa waad dareemi kartaa taabashada muusikada gacanta.
Hore: Suuf Surfboard Nadiifinta Kordhinta Maraakiibta 0370
Xiga: Tayada tayada sare leh ee buufinta cufan ee loo yaqaan 'SUP paddle board' 0371
Golaha Wasiiradda Kaydinta Musqusha
Golaha Wasiiradda Kaydinta
Golaha Jikada Kaydinta jikada
Armaajooyinka Kaydinta Jikada
Golaha Wasiirada Kaydinta Bannaanka
Kaydinta Golaha Wasiirada Biyuhu
Golaha Wasiirada Kaydinta Qalabka
Armaajooyinka Keydinta Qoryaha
Daboolida Sariirta #Sofa Dhamaan Ujeedada Teddy Labrador ...
Shaxda Casriga ah ee Casriga ah ee lugaha, Mini adag ...
Mid ka mid albaabka afar khaanadda Side Golaha Wasiirada Sariir S ...
Qolka adag ee alwaaxa lagu fadhiyo Furniture TV taagan # 0014
Buufin barafka taagan-up surfboard yoga bo ...
Hoyga Macaan 2-Heer Xayawaan yar oo Qaabdhismeed Qaab ...
Dareenka ka dib booqashada Lanfang furnit ...
Ereyga muhiimka ah ee qalabka 'Amazons' waa R ...
Dammaanadda Tayada Qalabka Amazons
Maya. 300 Yuanfeng Street, Shengcheng Subdistrict, Shouguang, Weifang, ShanDong Province, China
Hada Naga Soo wac: 008613792661055